IGeoHot ifumana inkxaso-mali kwimoto yayo ezimeleyo | IPhone iindaba
Ijailbreak legend GeoHot ifumana inkxaso-mali kwimoto yakhe ezimeleyo
Kwiinkampani ezinkulu, kubonakala kucacile ukuba imveliso enkulu elandelayo inxulumene neemoto. UGoogle kunye noApple sele bekhuphe iAuto Auto kunye neCarPlay kwaye kubonakala ngathi bobabini basebenza kwimoto ezimeleyo. Kodwa kubonakala ngathi ayingabo bodwa abacinga ngayo. Abanye abantu abangabalulekanga kakhulu bayalungiselela olu hlobo lwesithuthi, njengesigebenga esidumileyo uGeorge Hotz, aka GeoHot, aziwa ukuba ngowakudala kwimeko yejele okanye ukukhulula i-PS3, neyamsa enkundleni.
Sifundile kunyaka ophelileyo ukuba iGeoHot icwangcise ukwenza eyayo Isoftware ezimeleyo kwaye waseka inkampani yeComma ngenjongo yokuba ngomnye woovulindlela ekuxhobiseni izithuthi ngobukrelekrele. Ekuqaleni singacinga ukuba inkwenkwe engafikeleli kwiminyaka engamashumi amathathu ubudala ayinakukhuphisana neApple, uGoogle okanye uTesla, kodwa amahemuhemu sele ejikeleza ukuba iGeoHot ifumene inkxaso-mali yeprojekthi yakhe.
I-GeoHot ikufutshane nokwenza isoftware yayo ezimeleyo
Iprojekthi ye-Hotz yokuqhuba imoto inokuba nobunzima kubuntwana, kodwa i-CEO yeTesla Motors U-Elon Musk wamqaphela waze wamnika nomsebenzi, iqhekeza leendaba sonke esikhe safunda ngalo kungekudala kwaye ezenza intengiso entle kwiGeoHot, iComma kunye neprojekthi yabo yemoto ezimeleyo eza kusebenzisa Inkqubo yokusebenza Ubuntu ukusebenza. Okwangoku, inkampani ixabisa malunga ne-20 yezigidi zeedola, engalunganga kwinkampani ezelwe kukungcakaza.
GeoHot nayo udale iqela elibalulekileyo Kwiphulo lakhe lokudala imoto ezizimeleyo eyonwabela ukugqwesa. I-hacker edumileyo yajoyinwa ngu-Yanus Saatchi, ugqirha we-Philosophy ye-Artificial Intelligence. Inxalenye yeqela nguJake Smith, umntu obalulekileyo kuluntu lwaseBitcoin. Ukongeza, i-Hotz ikwaceba ukwandisa iqela ngaphambi kwehlobo ngokuqesha abantu abanolwazi lokufunda ngomatshini kunye nentsimi yezixhobo zabathengi.
I-GeoHot kunye neqela lakhe abanazo iiprototypes okwangoku, kodwa bakholelwa ukuba iComma iya kuba nakho ukuhambisa into ngokuphela konyaka kwaye eyona njongo iphambili 'ube ngumboneleli wesoftware kubavelisi bemoto kunye nababoneleli«.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ijailbreak legend GeoHot ifumana inkxaso-mali kwimoto yakhe ezimeleyo
I-Apple isusa iFlexBright kwiVenkile yeApple ngokwaphula imithetho
USacha Baron Cohen uphefumlelwe lilizwi eliphambili likaApple ukukhuthaza imovie yakhe entsha